Ku abuur sawir leh wax dhalaalaya: barnaamijyada ugu fiican iyo boggaga internetka ee la sameeyo | Abuurista khadka tooska ah
Abuur sawir leh Glitter saameyn
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta
El Saamaynta dhalaalaysa waa mid iska amaahiya siinta dhammaan iftiinka haybad leh oo aan la wadaagno xafladda Sannadka Cusub ama xitaa xayeysiintaas loogu talagalay Codorniu cava taas oo codadka dahabku ay yihiin kuwa ugu caansan.
Waa erey aan ku heli karno natiijooyin tiro badan iyo taas Infographics waxay noo horseedaa inaan siino taabashada dhalaalaya iyo taas oo wax waliba ay umuuqdaan inay ka ifayaan horjoogaha. Waxaan ku baraynaa waxa uu yahay dhalaalka dhalaalaya, barnaamijyada qaar si ay ugu awoodaan inay u adeegsadaan dhammaan sawirada aad rabto iyo casharka mini si daqiiqado yar gudahood aad saameyn ugu yeelato sawir ahaan.
1 Waa maxay saameynta dhalaalaysa
2 Sida loo codsado saameynta dhaldhalaalka ee Photoshop
3 Barnaamijyada si dhaldhalaal loogu sawiro
3.1 Glixel - Glitter iyo Pixel Raadka
3.2 Kirakira + oo loogu talagalay iOS iyo Android, barnaamijka caanka ah
3.3 Shine - Sawir muuqaal ah oo muuqaal ah
3.4 Kaamirada dhalaalaya ee 'selfie'
4 Websaydhada si loogu sawiro sawirada leh dhalaalaya khadka tooska ah
4.3 Saamaynta Sawirka Stardust
Waa maxay saameynta dhalaalaysa
Dhaldhalaalka Isbaanishka macnihiisu waa iftiin, markaa waxaad ka heli kartaa fikrad fiican waxa ay tahay saameyntani. Wax walba resplendent waa la xiriira sidaa darteed shey kasta oo ka dhalanaya waxyeellada dhalaalaysa ayaa u ifaya sida xiddigta oo kale.
Waxaa loo adeegsadaa wax badan sawir ahaan alaabada quruxda ama kuwa timaha halka dhalaalka waa wax walba si xoog leh loogu soo jiito dareenka macaamiisha iyo isticmaaleyaasha mustaqbalka. Barta 'Instagram' waxaan ku arki karnaa qoraalo fara badan iyo, in kastoo aan u maleyneyno inay u baahdeen xirfadle si loo hirgeliyo saameynta dhalaalaya, kulama yaabin doono waxa shaandhada wanaagsan ee sifiican loo dabaqay ay uqaban karto.
Si fudud waa halo xiddigo yaryar kaas oo libdhi kara ka dib marka gaariga Cinderella dhaafo inta uusan laba iyo tobanka habeennimo gaarin Xitaa kabtiisa dhalada ayaa leh saameynta dhalaalaysa taas oo ka dhigaysa mid si xoog leh u soo jiidata indhaha qof walba. Marka waad sifiican u fahmi kartaa sida loogu dabaqi karo sawir qaadista sidaasna sawiradaas aan dooneyno inaan kula wadaagno shabakadaha bulshada ka dhiga kuwo sifiican u muuqda.
Sida loo codsado saameynta dhaldhalaalka ee Photoshop
Si loo adeegsado saameyntan oo ay u ekaato mid soo jiidasho leh, waxaan u soconeynaa soo dejiso qoraal marka hore oo aan u adeegsan doonno sidii sawir aan markaas gooyn doonno si aan ugu dabbaqno goob cayiman. Xaaladdan oo ku saabsan moodel.
Waxaan tagnaa Google oo waxaan raadineynaa "muuqaal dhalaalaya".
Mid kasta oo ka mid ah sawirada ayaa noo shaqeyn kara. Waxay kuxirantahay midabka iyo codka aan rabno. Haddii aan dooneyno in sawirku noqdo mid tayo sare leh. Hagaag, waxaan isticmaalnaa shaandhada cabirka sawirka.
Waxaan tagi karnaa Unsplash oo soo dejisan karnaa sawirka moodel sida kan sawirka ku jira.
Tusaalaha waxaan ku soo xulnay qaybta muuqata ee funaanadda oo leh qaansada.
Waxaan kaqeybineynaa qeybtaas lakab cusub
Waxaan ku dhajineynaa qoraalka qaybta la soo guuriyey.
Waxaan ku xulannaa lakabka qaybta la soo guuriyey ee moodelkan oo anagoo wata mashiinka sixirka waxaan ku dooraneynaa meel ka baxsan qeybta la soo guuriyey si aan u xulano aagga oo dhan oo aan xigi doonno xiga.
Waxaan dooranaa lakabka dusha sida uu yahay oo si toos ah masixi sidaa darteed waa la jarjarayaa sidaan u soo xulnay qeybta sawirka.
Waxaan dooranay muuqaalka dhalaalka dhalaalaya oo waxaan hoos ugu dhignay 43% buuxintiisa waxaana dooranay "linki laydh" qaab isku qasid ah.
Waxaan hadda u soconnaa Sawirka> Wax-ka-beddelka> Qalooca oo waxaan ku ciyaareynaa dhibic si aan u siino saameynta dhabta dhabta ah. Sida sawirka oo kale:
Ya waxay kuxirantahay sida aan rabno Saamaynta waxaan ku sii kala bixin karnaa Curves.
Waa arrin dooro farriin ku habboon sawirka in aan dooneyno si aan u helno codadka ugu fiican saameyntuna waxtar badan ayey u leedahay ujeeddooyinkeenna. Laakiin kaalay, adoo taabanaya, xoogaa goyn ah oo ku ciyaaraya daahfurnaan lagu daray heerka gooladaha, waxaan heli karnaa natiijooyin aad u wanaagsan.
Barnaamijyada si dhaldhalaal loogu sawiro
Waxaan ku bari doonaa taxane ah barnaamijyada loogu talagalay Android iyo iOS taasi waxay noo oggolaaneysaa inaan ku keydinno shaqada Photoshop iyo taasna mahaddeeda miiraha iyo taabashada qaarkood halkan iyo halkaas, waxaan ku dabaqi karnaa saameynta dhalaalaysa ee muddada dheer la raadinayey
Glixel - Glitter iyo Pixel Raadka
Barnaamijkan ayaa kuu oggolaan doona ku dabakho saameyntaas aad rabtid adoo sawir qaadanaya taas ayaa lagu dabaqi doonaa dhaldhalaalka. Haddii aynaan jeclaan sida ay umuuqato, waan tirtiri karnaa oo markale codsan karnaa illaa dhamaadka aakhirka sidaan rabno. Waxyaabaha ay ka kooban tahay oo dhan waxaan ka heli karnaa saameyn kala firidhsan, qaabab, otomaatig iyo saameyn otomaatig ah si markaa ilbiriqsiyo gudahood aan ugu isticmaalno saameyntaas.
Una ee barnaamijyada ugu badan ee laga soo dejiyo Android iyo inay leedahay dib u eegis ka fiican, markaa in yar oo aan qaybteenna ku dhejino, waxaan yeelan doonnaa sawirkaas oo dhalaalaya oo diyaar u ah in lala wadaago.
Glixel - dhalaalaya: U soo dejiso Android
Kirakira + oo loogu talagalay iOS iyo Android, barnaamijka caanka ah
Waxaan nahay ka hor App-kii dadka caanka ah ugu waaweynaa ku waashay. Selena Gomez, Paris Hilton ama Rosie Huntington-Whiteley ayaa adeegsaneysay iyo fiidiyowyadooda dib loo soo cusbooneysiiyay iyo sawiradooda, waad ogtahay sida ay u sameeyeen, Kirakira +.
Waxaad ka arki kartaa gudaha fiidiyowgaan oo ku yaal Instagram sida wanaagsan ee saameyntani u egtahay haddii si sax ah loo adeegsado:
Dib-u-fiirin fiidiyowgeenna oo faafay dhowr bilood ka dib. Wareejintan xiisaha leh waxaan u adeegsannay barnaamij dhalaalaya? Iibinta xaalufin! 50% OFF, DHAMMAAD Beri ?? hadaadan akhrin karin qoraalka, ha faallo diidmo. Dareenka ayaa xannibmay. #london #glam #glowy #goldenglow #birmingham #makeupporn #makeupaddict #maquillage #maleza #highlighteronfleek #highlighteraddict #wakeupandmakeup #makeupmafia @universodamaquiagem_oficial #makeupswatches #maquillage #ma sminke #highlighteronfleek #highlighteraddict #wakeupandmakeup #makeupmafia @universodamaquiagem_oficial #makeupswatches #maquillage # maquillageheswatches #instamakeup #picoftheday #beautyinsider #makeupartist #sarazaarcosmetics #makeupobsessed #instabeauty #girlquotes #highlighterjunkies #makeupporn
Fariin ay wadaagaan Sarazaar Cosmetics® ma tahay? (@saarazaarcosmetic) on Sep 23, 2017 at 4: 29am PDT
Kuwa kale, uma muuqato wax xun:
@selenagomez x @coach? @xDayaannax @tombachik? @Dayaannax @xDayaannax
Fariin ay wadaagaan Hung vanngo (@hungvanngo) waa Sep 12, 2017 at 12: 53pm PDT
Barnaamijkan waxaan leenahay laga heli karaa labada macruufka iyo Android. Bilaash kuma aha macruufka, laakiin waxay leedahay celcelis ahaan dhibcaha 4,8 oo in ka badan 7.400 dib u eegis la siiyay. Waxay noo ogolaaneysaa inaan sawir ama muuqaal ku qaadno saameynta dhalaalaya, aan wax ka bedelno sawirrada iyo fiidiyowyada aan hayno, isticmaalno tilmaamyo si aan u beddelno saameynta iyo xitaa u hagaajino iftiinka waxyeellada.
Mid ka mid ah wanaagga ugu wanaagsan ee barnaamijkan ayaa ah inuusan lahayn badhanno badan ama xulashooyin, laakiin halkii interface-keedu waa xariif ku filan sidaa darteed dhowr badhan awgeed waxaan ku dabaqi karnaa saameynta ka dibna isticmaalnaa tilmaamaha si aan u bedelno. Tani waa faa iidadeeda ugu wanaagsan hadaan isbarbar dhigno mid horey loogu soo sheegay Android.
Kirakira +: Ku soo dejiso macruufka
Kirakira +: Ku soo dejiso Android
Shine - Sawir muuqaal ah oo muuqaal ah
Sida macruufkii hore, mahadnaqidda tilmaamaha aan sameyn karno kala beddel saameynta dhaldhalaalka ee kala duwan loo soo bandhigo isticmaalaha iPhone-ka. Waxaa lagu gartaa in lagu daro dhammaan xiddigahaas iyo saameynta soo jiidashada leh si ay wajiyooyinka ama sawiradaas kirismasku u ekaadaan sidii hore oo kale.
Taageertaa sawir shaashad buuxda iyo sidoo kale 1: 1 sawiradaas loogu talagalay Instagram. Waxay leedahay halbeeg lagu daro waxyeello dhalaalaysa oo weyni waxayna leedahay taxane kale oo xulashooyin ah oo aad ku tafatiri karto fiidiyow sida adigu u aamusin, ama ku dar codad. Sidoo kale ikhtiyaarkaasi kama maqna sawir qaadasho iyo in aan ku dhejin karno saameyntaas dhalaalaysa.
Sida kirakira + xaqiiqda ah in la isticmaali karo kamarada Si aad u duubto fiidiyowyo leh saameyntaas dhalaalaysa, naga badbaadi xaqiiqda ah in dib loo beddelo fiidiyaha. Haddii aadan rabin inaad waqti lumiso, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho kamaraddaada iPhone-ka oo aad naftaada waqti fiican ku badbaadiso.
Shine - Sawir Muuqaal Muuqaal ah: Ku soo dejiso macruufka
Kaamirada dhalaalaya ee 'selfie'
App kale sida labadii hore oo kale oo aan ku hayno Android. Mid ka mid ah faahfaahinteeda ayaa ah ka mid noqoshada istiikarada si dhakhso leh loogu beddelo timaha. Waxay sidoo kale leedahay emojis iyo tattoos lagu qurxiyo sawiradaas.
Sidoo kale kama maqna fiidiyow ama muuqaal tafatir si loogu daro saameynta dhalaalaysa Haddii aad jeceshahay saameynta bokeh, waad codsan kartaa (halkan waxaan ku tusaynaa sida loo codsado Photoshop), sidaa darteed marka loo eego guud ahaan waxaan wajaheynaa barnaamij ka xiiso badan. Waa arrin isku dayo dhowr ah oo aan la joogno midka na siinaya natiijada ugu fiican waxa aan raadineyno.
Websaydhada si loogu sawiro sawirada leh dhalaalaya khadka tooska ah
Waan raacnaa dhowr degel si aad wax uga beddesho sawirrada in aan ku dooneyno saameyntan iftiinka leh oo aan ku awoodi karno inaan ku soo jiidanno dareenka shabakadda bulshada ee aan ku dhejinno. U tag.
Website-kani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican iyo wuxuu si toos ah nooga dhigayaa marka hore tifaftiraha oo lagu gartaa qalab taxane ah oo ku yaal xagga sare. Waa inaan xasuusnaano inay ku qoran tahay Ingiriis, laakiin haddii aan u tagno qoraalka 'Glitter text' ama saamaynta, waxaan ka heli karnaa qaar ka mid ah wanaagyadeeda ugu waaweyn
Waxaad isticmaali kartaa «Glitter fill» illaa buuxi meelaha oo leh saameyn dhalaalaya ama haddii aanan dooneynin inaan nolosheena dhib ku galino, mid ka mid ah shaqooyinkeeda ugu fiican waa adeegsiga qoraalka Glitter-ka si loogu daro qoraalka sawir kasta. Waxaan ka dooran karnaa noocyo kala duwan oo wanaagsan, noocyo kala geddisan oo dhalaalaya iyo xulashooyin kale oo taxane ah si aan u qaabeyno qoraalkaas.
Si aad u dhamayso, si fudud guji «Faylka», waxaan ku siineynaa «Save as JPG» oo waxaan ku haysan doonnaa feylkeena kumbuyuutarkayaga. Barnaamij fudud oo webka ah oo haddii aan ka shaqeyno aan ku heli karno saameynta iftiinka la doonayo.
Glitterphoto.net: ku xir shabakadda
Kuwa kale shabakad xiiso leh oo noo geynaysa sawirro si ku-meel-gaadh ah u yimid, laakiin inaan u kici karno inaan doorano kuweenna. Marka tan la sameeyo, waxaan dooran karnaa saameynta dhalaalaysa ee aan dooneyno iyo xawaareheeda si aan ugu dabaqno. Waxaan ku arki doonaa natiijada shaashad cusub oo aan ka heli doonno tifaftiraha noo ogolaanaya inaan sameyno wax ka beddelka aasaasiga ah sida gradients, buuxinta, jarista, ku darista qoraalka iyo waxyaabo kale oo badan.
Sidoo kale waa ingiriis, laakiin tani macnaheedu maaha inaan u isticmaalno saddexdaas tallaabo oo aan yeelanno sawir la soo raray oo leh saameyn dhalaalaysa. Haddii aan horeyba u dooneynay inaan si qoto dheer ugu galno barnaamijka webka, waxaan isticmaali karnaa inta hartay ee miirayaasha, saamaynta, farshaxanka, animation iyo inbadan Websaydh leh is-dhexgal aasaasi ah, laakiin taasi waxay ku siin kartaa natiijooyin wanaagsan haddii aan sameyno.
Sawirka Dayaxa: ku xir shabakadda
Saamaynta Sawirka Stardust
Waxaana ku dhamaaneynaa midka aan isleenahay waa websaydhka ugufiican ee internetka ee lagu dabakho saamaynta dhalaalaya. Ma aha oo kaliya saameynta ay si deg deg ah oo toos ah u soo saareyso, laakiin sidoo kale sababtoo ah isdhaafsi nadiif ah oo ka casrisan labadii hore. Taasi waxay tiri, ma heli doontid noocyo kaladuwan oo xulashooyin ah iyo qalab aasaasi ah midkoodna, laakiin maadaama waxa aan dhab ahaan dooneyno ay tahay in lagu dabaqo noocyada noocan ah ee saameynaha, maxaad u dooneysaa wax intaa ka badan?
Waxaan galineynaa sawir waxaana la adeegsan doonaa saameyn "stardust" ah inaad uga tagto sawir sida kan aad ku aragtay tusaalihii hore. Runtu waxay tahay inay si fiican u qabato. Haddii aan rabno, waxaan beddeli karnaa xoojinta saameynta "stardust", ee ugu la mid ah saamaynta dhalaalaya.
Quruxsan, waa a aaladda internetka taas oo kuu ogolaaneysa inaad sawir ku sameysato saameyn dhalaalaya, kaliya adoo soo gelinaya sawirka aad rabto waxaad ku arki kartaa saameynta daqiiqado yar gudahood.
Taxane dhan oo xulashooyin ah si loo helo saameyntaas dhalaalaysa Taasina waxay ku xirnaan doontaa awoodda aan u leenahay Photoshop, barnaamijka aan ku rakibeyno taleefannadeenna iPhone ama Android ama shabakadda internetka ee noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno si aan uga tagno sawir natiijooyin wanaagsan leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Abuur sawir leh Glitter saameyn
WAAN JECLAHAY BARBARKA LAAKIIN HADII AAD IGU CAAWISO INAAD II SHEEGTID KA MID LABADA QODOBO EE AAN KU SOO KOOBAN KARO INAAN KU QURxiyo
Aad baad ugu mahadsantahay bogga, laakiin fadlan waxaan u baahanahay caawimaad, ma aqaano sida loo dhajiyo sawirada, boggeygu ma lahan dookha sonic. Waxa kale oo jira laba xiriiriye, ii sheeg sida loo sameeyo iyo waliba haddii aad ku dhejin kartid xarfaha msn? Waxaan rajeynayaa inaad ka jawaabto mahadsanid !!!!
Runtii aad baan uga helay meeshan runtii waa mid aad u wanaagsan aaladaha lagu abuurana saamaynta ayaa ah mid aad u fudud oo fudud in la isticmaalo saameynteeduna aad u wanaagsan tahay
hanbalyo iyo horay
Waxaan kugula talinayaa inaad ka mid noqoto asxaabteyda salaanta La Paz, Baja California Sur Mexico
Jawaab ku sii CASIMIRO GARDEA OROZCO
Si aad saxiixaaga ugu dhigto qoraal dhalaalaya ama sawir, iwm. Kaliya abuur waxa aad rabto inaad dhigato, hotmail tusaale ahaan waxaad aadeysaa ikhtiyaariyada boostada halkaasoo ay ku qoran tahay "fursado badan" iyo cinwaanka oranaya "shaqsiyeysid waraaqdaada" waxay umuuqataa saxiixa shaqsiyeed ee emaylka. Waad gujineysaa daaqaduna waxay umuuqataa sidii inaad qori laheyd emayl cusub, sanduuqa liiska midigta kuyaala oo ay ku qorantahay qoraalka qaniga ah, dhagsii oo xulo edit-ka HTML Cinwaan ayaa ka muuqan doona koodhka intaa kadib waxaad dhejineysaa nambarka html ee ku siinaya qoraalkaaga lagu abuuray glitterfly ama sawirka ama waxaad sameysay oo ku dhaji, ka dib markaad dhajiso, si uusan halyeeygu u muuqan [Glitterfy.com - * Ereyada Dhaldhalaalaya *] waxaad ku cadaadineysaa tan koodhka kaliya waxa ku lifaaqan labaatanka laba jibbaaran oo ay kujiraan qawska. iyo voila waad keydineysaa isbedelada. Si aad u tijaabiso, waxaad u soo dirtaa emayl tijaabo ah naftaada halkaasna waxaad ku arki doontaa natiijada saxeexaaga. Salaan kadib waxaan rajeynayaa inay kuu adeegto.
QOF KII OGAADSAN SIDE LOOGU SOO DIRI KARAA BARNAAMIJ XAQIIQ AH SI AAD U QORTO QURXINTA SAWIRADA SAWIRADA MONTAGES GLITER IWM. …… ..
PÒRFA MAALMO MAALMO LEEYAHAY OO AAN HELI KARIN
Waan ka fogaanayaa dijo
sideen u soo dejisan karaa
Jawaab ku siiso martida
Sideen u keydsadaa sawirada kumbuyuutarka?
Waxaan aad u jeclahay sawirada ZAC
Boggan waa ugu badnaan
Ku jawaab Jocelhyn
BAYA BARNAAMIJ Q AAN LAGA SOO SAARI KARNIN
weyn !! mahadsanid .. waan isticmaali doonaa ... <3
Ku jawaab lia-sama
Waa maxay mawjad, saaxiibbaday, sidee u yihiin fasaxyada halkan? Anigu waxaan ahay dameer galab kasta aniga oo si dhib yar u dhaqaajiya laba farood lol.
Anigana waxaan saaray muusig BIG TIME RUSH
Kumaa jecel BILAASHA WAQTIGA BADAN fadlan ii soo jawaab ah oo waliba aniga oo i dhigta kan jecel waqtiga weyn degdega !!!!!
Ami Waan jeclahay Logan horeyna waan u aqaanaa wax walba oo ku saabsan dhalashadiisa bisha september 14 !!!!!!!!!
Isagu waa amiirka noloshayda
Ku jawaab dary
Boggan waa mid aad u qurux badan, runtii waxaan kugula talinayaa adiga bexoz
Ku jawaab addy
waan mahadsanyahay talada waan isku dayi doonaa. dary sidoo kale waan jeclahay logan gaar ahaan maxaa yeelay way fududahay inantayda wax badan ayey lahadashaa isaga iyo dadka kale, laakiin midka hinaasaha badan ma doonayo inuu ii sii gudbiyo laakiin waxaan ku raad joogaa salaanta dhamaan.
Ku jawaab lucy
Michael dayax dijo
Waxay u egtahay mid fiican laakiin sidee baan u soo dejinayaa
Ku jawaab Miguel luna
Ku jawaab gabriella
hello waan ka helay !!! haha xD xD WAAN KU GUULAY!
Waan jeclahay inaan sawiro ku qaado halkan
sida quruxsan waan jeclahay ……
Jawaab Samy Galiindo
Tani waa mid aad u qabow :-) :-) Way i xiiseeysaa waa wax aan caadi aheyn oo saaxiibkay saaxiibkiis ...
Priscilita Akd dijo
Sideen sawirro uga qaadaa
Jawaab Prisciliita Akd
& Waxaan tolaa sida loo isticmaalo: _ Waxaan rabaa mid, sidee u sameeyaan, waa facebook sidan oo kale leh xarfaha qabow
Mahadsanid waan jeclahay.
Kujawaab M ??? ?
Sideen u soo degsadaa sawirka ???
Ku jawaab Margarita González Síllas